Baarlamaanka Kenya oo Maanta ka Doodaya soo Jeedinta Madaxweynaha ee Arrimaha Shidaalka – The Voice of Northeastern Kenya
Baarlamaanka Kenya oo Maanta ka Doodaya soo Jeedinta Madaxweynaha ee Arrimaha Shidaalka
Star FM September 20, 2018
Xildhibaanada baarlamaanka Dalka Kenya ayaa maanta la filaya inay yeeshaan kal fadhi ay uga doodayaan waxyaabo dhowr ah oo ku xusan qoraal uu u soo gudbiyay hoggaamiyaha wadanka Mr. Uhuru Kenyatta.
Jimcihii la soo dhaafay ayay ahayd markii madaxweynaha dalka uu ku talaiyay in qiimaha cusub ee lagu kordhinayo canshuurta shidaalka laga dhigo boqolkiba 8 halka horay qorshaha dowlada uu ahaa boqolkiba 16.
Baarlamaanka ayaa horay muddo laba sano ah dib u dhigay in lagu tallaabo qaado qorshihii hore ee dowlada.
Kulan ay mudanayaasha yeesheen maalinkii talaadada ayay si aqlabiyad leh madaxweynaha ugu tagereen go’aanka uu qaatay in kastoo weli ay jiraan kenyaan doonaya in canshuurtaasi gebi ahaanba meesha laga saaro.
Hadii qiimaha canshuurta laga qaado noocyada kala duwan ee shidaalka laga dhigo boqolkiba 8 , waxaa dowlada soo galaya dhaqaale gaaraya 17.5 bilyan oo shilin.
Wasaaradda maaliyadda ayaa baarlamaanka hor geysay qorsho ay ku doonaysa in miisaaniyad sannadeedka 2018-2019-ka oo ah 3.026 tiriliyuun oo shilin laga dhimo 55 bilyan.
Wasiirka wasaaradda maaliyadda Mr . Henry Rotich ayaa mudanayaasha ugu baaqay inay ansaxiyaan qoraalka uu madaxweynaha soo gudbiyay ee dhanka maaliyadda ah.
Soo jeedinta madaxweynaha waxaa ka mid ah in dowlada uu dhaqaale dhan boqolkiba 20 uga soo xaroodo qarashaadka bangiyada ay saaraan macamiisha lacagaha isku diraya.
Si qorshaha dowlada uu u meel maro waxaa loo baahanyahay inay tageraan ugu yaraan 233 ka mid ah 349 oo ah tirada mudanayaasha.
Miisaaniyad sannadkeeda qaranka ee la dhimayo ayaa waxaa suurtagal ah hadii ay xidhibaanada ansaxiyaan inuu saameyn ku yeesho wasaarado iyo waaxya dhowr ah.
Wasaaradda dowlad wadaajinta ayaa dhaqaalaha loo qoondeeyay laga dhimaya 6 bilyan oo shilin, wasaaradda maaliyadda sido kale 6 bilyan , wasaaradda warfaafinta, isgaarsiinta iyo teknolojiyadda waxaa miisaaniyadeeda laga jaraya 5.9 bilyan , midda tamarta 2.6 bilyan, gaadiidka iyo kaabayaasha wadooyinka 8.7 bilyan iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo uu ku imaanayo gaabad dhaqaale oo ah 179.5 milyan oo shilin.
36 bilyan oo baarlamaanka loo qoondeeyay ayaa laga jaraya 5 bilyan halka guddiga qaran ee dhulallka miisaaniyadiisa laga dhimayo 50.4 milyan oo shilin.
Wasaaradda waxbarashada gaar ahaan waaxda culuunta farsamada ayaa lumin doonto 1.3 bilyan , tacliinta sare iyo cilmi baarista ,1.07 bilyan halka guddiga adeega macalimiinta ee TSC oo laga dhimayo 67.7 milyan oo shilin.
← Gang stabs Somali radio journalist to death
(Dhagayso) Wasiirka Caafimaadka Garissa County oo ka Hadlay Arrinta Tarmuusyada →